Umthetho: Ukuthumelelana imiyalezo ngeScotland eScotland | I-Foundation Foundation
Ikhaya The Law Ukuthumela imiyalezo nge-SMS ngaphansi kwe-Scotland
“Ukuthumelelana imiyalezo yocansi” akusilo igama elisemthethweni. Ukuthumela imiyalezo ngocansi “izinto ezikhiqiza ucansi eziziveza obala”Kwenziwa ikakhulukazi ngama-smartphones. Njengamanje, "ukuthumelelana imiyalezo yocansi" yokuziphatha kwezinhlobo ezahlukahlukene eScotland kungashushiswa ngaphansi komunye wemithetho eminingi futhi kuyinkinga eyinkimbinkimbi. Izigaba zomthetho ezingenhla yizona eziyinhloko okungenzeka zisetshenziswe abashushisi. Noma ngabe sikubiza kanjani, 'ukuthumela imiyalezo yocansi' kungumsebenzi ojwayelekile phakathi kwezingane nabantu abadala ngokufanayo. Ngoba nje ingane iyavuma ukwenza noma ukuthumela isithombe, akusenzi sibe semthethweni. Ubugebengu obunikwe amandla yi-cyber bungeminye yemikhakha ekhula ngobugebengu namuhla.
Icala lokugoqa ukungenela inkambo yokuziphatha ngenhloso yokubangela ukwesaba ne-alamu. Konke noma ingxenye yaleyo nkambo yokuziphatha kungaba ngocingo noma kusetshenziswa amasayithi ezokuxhumana nokushicilela okuphathelene nalowo muntu.Iya ngokuya ivama kakhulu phakathi kwezingane. Akukona nje ukubhekela umuntu uqobo.
USihlalo wethu, uMary Sharpe, uyilungu Lophiko Lwabamele Abamele kanye neKolishi Lobulungiswa. Unolwazi ngomthetho wobelelesi kuzinhlangothi zombili zabashushisi nezokuvikela. Njengamanje uMary Sharpe usohlwini olungaziphathi lapho esebenzisana nesisa. Uyakuthokozela ukukhuluma nabazali, izikole kanye nezinye izinhlangano jikelele mayelana nemiphumela ebonakalayo yokuxubha nomthetho mayelana nokwenza okungcolile okuhlobene nokuya ocansini. Ngeke akwazi ukuhlinzeka ngezeluleko zomthetho zamacala athile.
Umthetho wobulelesi eScotland uhlukile emthethweni eNgilandi naseWales naseNyakatho Ireland. Bona lokhu esihlokweni ngesimo lapho kanye nesethu Page phezu kwakho. Izikhulu zomthetho ziphatha izikhalazo zalokho izifundiswa nezintatheli ezikubiza ngokuthi “ukuthumelelana imiyalezo yezocansi” njenganoma yiluphi olunye uhlobo lobugebengu obungahle bube khona. Bakwenza lokhu ngazodwana. Izingane ezingaphansi kweminyaka eyi-16 ngokujwayelekile zizodluliselwa ku Uhlelo Lokuzwa Kwezingane. Uma kwenzeka amacala abucayi afana nokudlwengula, izingane ezingaphansi kweminyaka engu-16 zingabhekelelwa ngokusebenzisa uhlelo lwezobulungiswa bobugebengu eNkantolo ePhakeme yaseJusticiary.
Uma ulahlwa yicala lokuya ocansini, uhla lwemisho lubanzi. Zizofaka nesaziso kuRejista yamaGqwetha ocansi yaleyo minyaka ye-16 futhi ngaphezulu kwedluliselwa ezinkantolo zobugebengu.
Ezinganeni ezingaphansi kweminyaka eyi-16, ukona ngokocansi kuzothathwa "njengokulahlwa yicala" ngezinhloso zeRehabilitation of Offersers Act 1974 yize kungabizwa kanjalo ku-Children's Hearing System. Kusho ukuthi kuzodingeka ukuthi badalule icala elinjalo emaphepheni asemthethweni uma befuna ukusebenzisana namaqembu asengozini kubandakanya nezingane. Leyo mfuneko ihlala iminyaka engu-7 nengxenye kusukela osukwini “lokulahlwa yicala” uma ingaphansi kweminyaka engu-18, futhi iminyaka engu-15 uma ingaphezu kweminyaka engu-18.
Umthelela ongokoqobo wecala lokuya ocansini emsebenzini, impilo yezenhlalo nokuvakasha kothile ongaphansi, nangaphezulu kwe-16, ubalulekile futhi uyaqondakala kancane. Isidingo sokudalula iphutha elincane ngesikhathi sezingane sizophathwa ngezinga elithile ku Ukudalulwa (eScotland) Bill njengamanje ngidlula ePhalamende laseScotland. Okunconywayo ukuthi ukulahlwa ngamacala ezingane ngeke kusadalulwa ngokuzenzakalela kubaqashi abazoba khona futhi bazokwazi ukubuyekezwa ngokuzimela ngeNkantolo Yenkantolo. Le nqubo yokugcina kungenzeka ibe ngezindleko zomuntu omusha.
Njengoba ukuhlukunyezwa kwe-inthanethi nokuhlukumeza ngokocansi kuya ngokuya kudlondlobala, abaphathi bezokushushiswa bathatha indlela esebenzayo. Othisha, abazali kanye nezingane kudingeka bazazise ngobungozi obukhona. Amaphampu abelana ngezithombe ezingezinhle abazitholile kwabanye bangashushiswa nabo.
Abakwa Reward Foundation benza izinhlelo zezifundo zezikole mayelana nomthetho kule ndawo. Uma unentshisekelo, sicela uxhumane ne-CEO yethu ku-mary@rewardfoundation.org ukuthola eminye imininingwane.
<< Ukuthumela imiyalezo ngocansi Ukuthumelelana imiyalezo yocansi ngaphansi komthetho wase-England, Wales & NI >>